Xiaomi Mi A1 (SKINS) အတွက်အခင်းအကျင်းများကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ တပ်ဆင်ပါ Androidsis
Xiaomi Mi A1 (SKINS) အတွက်အခင်းအကျင်းများကိုကူးယူပါ။
Francisco Ruiz | | Android ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ, လဲ tutorial, Xiaomi က
ဒီလက်တွေ့ကျသောဗီဒီယိုသင်ခန်းစာအသစ်မှာဘယ်လိုရှင်းပြရမလဲ Xiaomi Mi A1 အတွက် themes များကိုကူးယူပါ, ဒီ themes များနှင့်အရေခွံ Android Oreo ဗားရှင်းကိုလှိမ့်နေသော Xiaomi Mi A1 အားလုံးအတွက်တရားဝင်သည်။ ယခုနှစ်အကောင်းဆုံးဆိပ်ကမ်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးရာသီ၏အံ့အားသင့်စရာအကောင်းဆုံးဖြစ်သည်.
ဤအရာအားလုံးသည်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ၏ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည် ကြေးနန်းအပေါ် Androidsis အသိုင်းအဝိုင်းအသင်း ၀ င် ၇,၂၀၀ ထက်ကျော်လွန်သောအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်သည် သငျသညျဤတူညီသော link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ပူးပေါင်းနိုင်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူသည်မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်သည် @ BlackFire15အလှည့်အတွက်တစ် ဦး ၏လုပျငနျး shared သိရသည် Xiaomi အသိုင်းအဝိုင်းစမ်းသပ်သူ၊ Andrei Ortega အမည်ရှိစမ်းသပ်သူ ကြောင်းအနည်းငယ်အလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည် Xiaomi Mi A1 အတွက်ကောင်းသောအကြောင်းအရာများ။ ထိုအခါငါသူတို့ကို Xiaomi အသိုင်းအဝိုင်းကိုယ်တိုင်မှတဆင့်နှင့်, သင်တန်း, ကြီးစွာသော Androidsis အသိုင်းအဝိုင်းမှတဆင့်သူတို့ကို download လုပ်ဖို့ link တစ်ခုထားခဲ့ပါ။
1 Xiaomi Mi A1 တွင်အခင်းအကျင်းများကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ထည့်သွင်းနည်း
2 သို့သော် Xiaomi Mi A1 အတွက်ဤအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်မည်နည်း။
Xiaomi Mi A1 တွင်အခင်းအကျင်းများကိုဒေါင်းလုတ် လုပ်၍ ထည့်သွင်းနည်း
Xiaomi Mi A1 ရဲ့ setting ထဲမှာ၊ ဒီအပိုင်းကအရမ်းရိုးရှင်းပါတယ် pantalla, အဆင့်မြင့် options များ, တပြင်လုံးကိုရဲ့အဆုံးမှာလက်ျာဘက်၏နာမ၌အောက်ကအပိုင်းကိုတွေ့လိမ့်မည် ကိရိယာအကြောင်းအရာများXiaomi Mi A1 တွင်ကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်ပြီးထည့်သွင်းထားသော themes များကိုစီမံခန့်ခွဲရန်ဖြစ်သည်။
သို့သော် Xiaomi Mi A1 အတွက်ဤအကြောင်းအရာများကိုကျွန်ုပ်မည်သို့တပ်ဆင်မည်နည်း။
ဤအကြောင်းအရာများကို Xiaomi Mi A1 တွင်ထည့်သွင်းခြင်းသည်လွယ်ကူသည် ကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ဝင်စားသောအကြောင်းအရာ၏ apk ကို download လုပ်ပါ, (ဤကိစ္စတွင်အထူးသဖြင့်ဖိုင်များ၏အမည်အားဖြင့်သွားသည်ကိုသူတို့အများစုသည်အသိအမှတ်မပြုနိုင်သောကြောင့်၎င်းတို့အားလုံးကို download လုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပေးလိုသည်။ ) ပြင်ပတွင်ဒေါင်းလုတ်လုပ်ထားသော applications များကိုကျွန်ုပ်တို့ Play install လုပ်သကဲ့သို့ Google Play စတိုးသို့ထည့်သွင်းပါအမည်မသိရင်းမြစ်များဖွင့်ခြင်း။
ဤအထူးအခြေအနေတွင်အကြောင်းအရာများကို Google Drive တွင်တည်ရှိသည်။ Drive သို့မဟုတ် Google Chrome သို့ကျွန်ုပ်တို့ခွင့်ပြုချက်ပေးရမည်ကျွန်ုပ်တို့သည် themes များမည်သည့်နေရာမှ download လုပ်သည်ကို မူတည်၍ Android package auto-installer ပေါ်လာလိမ့်မည်။ apk ဖိုင်ကို download လုပ်ပြီးသည်နှင့် application ကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။
Access to Drive ။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် Andrei Ortega တွင်သူ Xiaomi Mi A1 အတွက်သူဖန်တီးခဲ့သောအကြောင်းအရာများရှိသည့်နေရာတွင်သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်။ Xiaomi အသိုင်းအဝိုင်းတရားဝင် site ကို ဒီတူညီတဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ရင် o ကြေးနန်းအပေါ် Androidsis အဝန်းဝင်ရောက် y Xiaomi Mi A1 အတွက်အဓိကအကြောင်းအရာများကိုမေးမြန်းခြင်း.
သက်ဆိုင်ရာ APK ကိုဒေါင်းလုပ်ချပြီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်၊ သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာသည်အပိုင်း၏အန်းဒရွိုက်ဆက်တင်များတွင်ပေါ်လာလိမ့်မည် ပြသခြင်း / အဆင့်မြင့်ချိန်ညှိချက်များ / ကိရိယာအခင်းအကျင်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်ချင်သောအကြောင်းအရာကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်အလိုအလျောက်နီးပါးအသုံးချလိမ့်မည်။
သင်ကပိုလိုချင်လား ဒါတွေကိုလက်မလွှတ်ပါနဲ့ Xiaomi Mi A1 အတွက်လှည့်ကွက်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » Xiaomi Mi A1 (SKINS) အတွက်အခင်းအကျင်းများကိုကူးယူပါ။
ဟယ်လို! နေကောင်းလား? ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်ပေးသည်မှာကျွန်ုပ်၏ MiA1 မျှသာဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်တွင်ဤအပိုင်းမရှိပါ။ S ၎င်းသည် Oreo ဗားရှင်း၊ Android 8.0.0 ရှိ ... ၎င်းသည်ထိုစနစ်မွမ်းမံမှုပြfailနာများထဲမှတစ်ခုလား။ ငါဒါကိုကုစားဖို့ဘာလုပ်ရမလဲ။
Andrei Ortega ဟုသူကပြောသည်
Andrei Ortega အားစာပြန်ပါ
Antonio Añasco ဟုသူကပြောသည်
ဤသည်မှာပြုပြင်ထားသော Oreo version ကိုအသုံးပြုရန်ဖြစ်ပါသည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်သည် Oreo နှင့်အတူရှိနေပြီး2018ပြီ XNUMX ၏လ patch နှင့်အတူရှိနေသောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့် option ကိုမျှမတွေ့မြင်ပါ။
Galaxy S8 beta ပရိုဂရမ်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်သည်
အကယ်၍ သင်သည်တကယ့်ခံနိုင်ရည်ရှိသောဖုန်းကိုရှာဖွေနေပါက NOMU မှရက်အနည်းငယ်ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသောကမ်းလှမ်းချက်များကိုအသုံးချပါ